Shiinaha Custom boorsooyinka boorsooyinka-saareyaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > Boorsooyin > Boorsada hal-garabka ah > Boorsooyinka qalabka
1. Boorsada qalabka product introduction:
(1) Gudaha waxaa ku jira 30 kiish qalab ah, 10 bacaha qalabka lagu xirto iyo guntin loogu talagalay qalab sudhan banaanka.
(2) Dhabarka waxaa loogu talagalay isbuunyo isbuunyo iyo garabka garbaha, wuxuuna ka samaysan yahay waxyaabo mesh ah, oo si wax ku ool ah u duugi kara dhabarka isla markaana gadaal u celin kara hawo. Waxay leedahay shaqo dhidid dhidid.
(3) Laba garbood oo ballaaran ayaa si wax ku ool ah u wadaagi kara culeyska, kala firdhinaya cadaadiska, una rogi kara cadaadiska xarkaha xabadka, si loo gaaro shaqada yareynta culeyska iyo ka hortagga boorsada inay siibato.
(4) Saldhigga balaastigga ee injineernimada wuxuu si wax ku ool ah u diidi karaa biyaha wuxuuna ka hortagi karaa daloolinta Wax ka qaban kara jawiyada adag.
(5) Dusha sare ee boorsada ayaa laga sameeyay 1680D dhar nylon ballistic ah, dusha sare ee dharka dharka ayaa lagu daboolay daahan biyaha celiya, saameynta biyo-biyoodka waa mid iska cad. Qalabkani wuxuu leeyahay xoog siligga sare waana xulashada la door bidaayo sameynta qalabka boorsada qalabka.
(6) Lakabka gudaha ee boorsada aaladda waxay ka samaysan tahay 210D dhar naylon dhar ah, oo leh isku dheelitirnaan aad u saraysa oo ka hortagga khilaafku. Sababtoo ah aaladda si isdaba-joog ah ayaa loo isticmaalaa, maaddada gudaha waa inay isticmaalaan dhar dhar ah oo leh isku dheelitirnaan sare si ay si wax ku ool leh uga dalaan gudaha boorsada qalabka.
(7) Boorsada aaladda waxay korsataa caag ay ku qaado, raaxo, siibasho la'aan, iyo nolol adeeg dheer.
(8) Boorsadeena qalabka waxay aqbashaa jiinyeer-qarxa-caddeyn + tayo sare leh zinc slider. Awoodda cadaadiska culus waxay si wax ku ool ah uga hortagtaa furitaanka bacda inuu qarxo oo uu jahawareeriyo inta lagu jiro isticmaalka. Nolol adeeg dheer iyo khibrad adeegsi oo wanaagsan.
2. Boorsada qalabka product parameters (specifications)
3. Sidee loo doortaa boorsada qalabka ugu fiican?
Haddii aad raadineysid boorso qalab ah oo siineysa meelo badan oo ka mid ah qaybaha iyo jeebadaha si aad u ilaaliso qalabkaaga iyo qalabkaaga, markaa boorsada qalabka FOFRER ayaa dhab ahaantii ah boorsada ugu habboon ee qalabka.
Ma raadineysaa boorsada ugu wanaagsan ee meesha? Haddii aad inta badan dhaqaajiso qalabka, haysashada boorsada aaladdu maahan mid ku habboon oo keliya, laakiin waa lagama maarmaan.
(1) Raadinta boorsada ugu habboon ee ergonomic iyo raaxo leh, markaa tan ayaa adiga loogu talagalay. Waxaa si gaar ah loogu talagalay xirfadleyda u baahan inay si joogto ah u lugeeyaan masaafo dheer ama ay jaranjarada si joogto ah u fuulaan
(2) Boorsada biyuhu ka samaysan yihiin waxaa laga sameeyey maaddooyinka ugu tayada wanaagsan.
(3) Raadinta boorso qalab ah oo bixin karta meelo badan oo ka mid ah qolalka iyo jeebabka si ay u ilaaliso qalabka iyo aaladaha.
(4) Waxay leedahay jeebado badan, oo kuu oggolaanaya inaad keydiso aalado noocyo iyo cabbirro kala duwan ah.
(5) Waxay ku leedahay salka hoose caag ah inay xasiliso oo ay ka hortagto inay bacdu jabto. Waxay sidoo kale leedahay xarigyo suuf ah, gacmo-qabsi iyo dhabarka dambe ee raaxada ugu badan.
(6) Neefsashada iyo taageerada jilicsan ee dhabarka waxay kaa dhigi kartaa inaad dareento qabow xitaa xilliga kulul. Gacmaha caagga ah ee ugu sarreeya iyo garabka garabka ee la isku hagaajin karo ayaa si fiican loo duubay, taas oo ka dhigaysa mid fudud in la qaado iyo raaxo
(7) Haddii mid kamid ah asxaabtaada ama qaraabadaada ay yihiin kuwa dayactira HVAC, tuubbooleyaasha, jajabka, nijaarrada, rinjiyeyaasha, beeraleyda, koronto yaqaan, sahamiyayaal ama shay kasta oo u baahan isticmaalka aalado badan, markaa boorsadaani waxay ku siin kartaa hadiyad aad u fiican.
5. Boorsada qalabka packaging and delivery
(2) Cabirka baakadka ee caadiga ah: dherer dhererkiisu yahay 36cm X dherer 18cm X dherer 50cm ah, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadeynta hadba baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka.
(3) faahfaahinta xirxirida: 38cm X 50cm X 52cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh.
Calaamadaha kulul: Boorsooyinka qalabka, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, la habeeyay, qiimaha, oraahda, keydka